မတ်လ 2017 |3၏စာမျက်နှာ 88 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2017 » မတ်လ (စာမျက်နှာ 3)
ရာထူး: ပံ့ပိုးမှုအင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီ: TVU ကွန်ယက်တည်နေရာ: Raleigh NC အမေရိကန်ကျနော်တို့ခရီးဆောင်ရာပူဇော်သက္ကာကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနည်းပညာခေါင်းဆောင်များမှာ (ENG) ထုတ်လွှင့်ဖြေရှင်းနည်းများစုဆောင်းအီလက်ထရောနစ်သတင်း "အသကျရှငျ" ။ 2005 ကတည်းကကျနော်တို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအဓိပ္ပာယ်ကဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ဖြေရှင်းချက်၏ကျယ်ပြန့်ဂေဟစနစ်ကိုကယ်နှုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကို၏ကမ္ဘာအဝှမ်းမှဦးဆောင်ထုတ်လွှင့်ရာပေါင်းများစွာများအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနည်းပညာကိုမိတ်ဖက်ဖြစ်လာကြပါပြီ။ ...
Web Portal နှင့်အီးမေးလ်အကြောင်းအရာအထူးကု - Entry Level
ရာထူး: Web Portal နှင့်အီးမေးလ်အကြောင်းအရာအထူးကု - Entry Level ကုမ္ပဏီ: မေပယ်တိုက်ရိုက်, Inc တည်နေရာ: Pennsauken NJ အမေရိကန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းန်ဆောင်မှုများအသင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့တာဝန်ရှိသည်, လှုံ့ဆော်မှု, Self-starter နှင့်ကစားသမားရှာကြသည်။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီကျွန်တော်တို့ရဲ့ web application ကိုနဲ့အီးမေးလ်ကြော်ငြာထုတ်ကုန်များအတွက်အမည်ပြောင်း PDF ကိုခြင်းနှင့်ပုံရိပ်ခြယ်လှယ်, အသုတ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဖိုင်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဘို့ ...
ရီနည်းပညာမိတ်ဆက် 4K + ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးအထူးအသေးစိတ်လှုပ်ရှားမှုကင်မရာ
4 FPS မှာ 60K ဗီဒီယို Capture မှ Virtual Reality အဆင့်လှုပ်ရှားမှုကင်မရာပထမဦးစွာ; အရည်အသွေးနှင့်စျေးနှုန်းရီနည်းပညာ, အဆင့်မြင့်, အသိဉာဏ်ပုံရိပ်နည်းပညာများ၏ဦးဆောင်, နိုင်ငံတကာပံ့ပိုးပေးဘို့နယူး Market ကနျ Standard သတ်မှတ်ရန်ယခု Amazon ကဗြိတိန် / Amazon ကစပိန် / Amazon ကပြင်သစ်အပေါ်ဥရောပ၌ဝယ်ယူရရှိနိုင်ဖြစ်ပါသည်, ၎င်း၏အလွန်အမင်းမျှော်လင့် Yi 4K + လှုပ်ရှားမှုကင်မရာကယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် နှင့် Aliexpress.com ။ အဆိုပါ ...
ရုပ်ရှင်မိုင်ယာမီ Calrec အသံ Summa နှင့်အတူသစ်ကိုထရပ်ကားကိုထုတ်မိတ်ဆက်
HEBDEN တံတား BRIDGE, ဗြိတိန် - 28 မတ်လ 2017 - ရုပ်ရှင်မိုင်ယာမီရဲ့ All-အသစ်ရှစ်ကင်မရာထုတ်လုပ်မှုထရပ်ကား၎င်း၏ပထမဆုံးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ-ဖြစ်ရပ်ဘွတ်ကင်များအတွက်လမ်းမှကြာသည့်အခါ, တစ်ဦး Calrec Summa ဒီဂျစ်တယ်အသံ console ကိုဘုတ်ပေါ်မှာဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါ Summa Calrec ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်ယုံကြည်စိတ်ချရ, Extensions များနှင့်သစ်ကိုထရပ်ကား, ရုပ်ရှင်ရဲ့ငှားရမ်းထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်များသိသိသာသာတိုးချဲ့ဖို့အသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်းတတ်၏။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်ကထရပ်ကား ...
ChyronHego ရဲ့ TRACAB အတူသုံးနောက်ထပ်ရာသီမှတွင်အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ်လက္ခဏာများ
MELVILLE, နယူးယော့ - မတ်လ 28, 2017 - အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ်တစ်ခုလုံးလိဂ်ဖြတ်ပြီး ChyronHego ရဲ့ဆုရ TRACAB (TM) ပုံရိပ်-based ခြေရာခံခြင်းစနစ်အားသုံးစွဲဖို့က၎င်း၏စာချုပ်သက်တမ်းတိုးခဲ့ပါတယ်။ 20 ကိုက်ညီမှာ TRACAB, Real-time ball- နှင့်ကစားသမား-ခြေရာခံခြင်းဒေတာကယ်နှုတ်တော်မူခြင်းနှင့် 2016 / 2017 ကျော်အားလုံး 2017 ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းများအတွက်ပွဲစဉ်ကစားသို့အစွမ်းထက်ထိုးထွင်းသိမြင် enable, 2018 / 2018 နှင့် 2019 / 380 ရာသီဆက်လက်ပါလိမ့်မယ် ...
IHSE SDI Signal ဖွဲ့စည်းရေးကိုအထောက်အကူပြုရန်နယူး Draco vario တိုးချဲ့မိတ်ဆက်
CRANBURY, NJ - မတ်လ 28, 2017 - IHSE အမေရိကန်နိုင်ငံထုတ်လွှင့် SDI ပုံစံများပြောင်းလဲနှင့်မည်သည့် IHSE KVM matrix ကို switch ကိုအတွင်း switched ခံရဖို့ခွင့်ပြု Extender တွေ၏သစ်တစ်ခုလိုင်းဖြန့်ချိခဲ့သည်။ အသစ် Draco vario SDI စီးရီး 3G-SDI မှ SDI signal ကိုကို formats တက်လက်ခံခဲ့သည်။ အဲဒီမှာ မှစ. , Extender တွေ Single-mode ကိုကျော် 10 ကီလိုမီတာအထိအရင်းအမြစ်နှင့်ဦးတည်ရာကို extensions တွေကိုခွင့်ပြုပါ ...
MultiDyne LightBrix vB-3800 Fiber ပို့ဆောင်ရေးနှင့်စက်ရုပ်ကင်မရာ Configuration အကြားတွင် adapter ခိုင်မာစေ
2017 NAB Show မှာမိတ်ဆက်ခံရဖို့သူတို့ Hauppauge, နယူးယော့, မတ်လ 30, 2017 စျေးကွက်မှလာအဖြစ်ကြမ်းတမ်း, ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဖိုင်ဘာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသစ်စီးရီးကင်မရာအသစ်မော်ဒယ်၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ် - ၎င်း၏ LightBrix vB-3600 ကြေညာ၏ဒေါက်တွင် throwdown ယူနစ်, MultiDyne fiber optic Solutions ဟာစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေသောဖြေရှင်းရန်တစ်စက္ကန့်သစ်ကို LightBrix စီးရီးကိုကြေညာ ...
Pre-NAB Show ကိုအင်တာဗျူးအတွက် Glookast
တစ်ဦး Pre-NAB Show ကိုဗီဒီယိုကအင်တာဗျူးအတွက် Glookast နှင့်အတူ Show ကိုတိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်း NAB ။
3 ၏စာမျက်နှာ 88«12345 » 102030...နောက်ဆုံး»